သစ္စာအလင်း: November 2010
Pilot Sayadaw Sanwaiga
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:06 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ခေါင်းစဉ် E- Book, ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး
သစ်ပင် တော်တော် များများ ကပြောတဲ့ စကားလုံး တွေ ခံစားချက်တွေ ကို နားလည် အောင် ကြိုစားနေတဲ့ ကျွန်မဟာ လူတွေကိုလည်း သစ်ပင်နဲ့တူတဲ့အချက်တွေ အမြဲ နှိုင်းယှဉ် စဉ်းစားမိလေ့ရှိတတ်ခဲ့ပါတယ်..။ သရက်ပင်လို…လူများ…ဒူးရင်းပင်လိုလူများ.. ထန်းပင် အုန်းပင်လို လူများ…. ဖရဲသီး လိုလူများ သံပရာသီးလိုလူများ…..................အဲဒီများစွာထဲမှာ ကျွန်မ ကတော့ ကာကီသီး လို ဖြစ်ချင်ခဲ့မိပါတယ်…။
အီတလီမှာ ကာကီ သီး (KakiFruit) လို့ခေါ်တဲ့ သူ့ရဲ နောက်အင်္ဂလိပ်နာမည်တမျိုး ကတော့ Perismon ဖြစ်ပါတယ်…။ သိပ္ပံနာမည်ကတော့ (Diospyros digyna) ဖြစ်ပါတယ်…။ ရှေးဟောင်း ဂရိဘာသာစကား အရ ကတော့ Diospyros ဆိုတာ "the fruit of the gods" နတ်ဒေဝါ များရဲ့ အသီး လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်..။
နတ်ဒေဝါများ ရဲ့ အသီး လို့တင်စားချင်းငှာထိုက်တန်လောက်အောင် သူ့စရိုက်လေး အလေ့အထလေးတွေဟာ တကယ် ပဲချစ်စရာကောင်းလှ ပါတယ်..။သည် အပင် နဲ့ ဒီအသီး ဟာ ကျွန်မရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတော်တော် ဖမ်းစားနိုင်စွမ်းရှိခဲ့လို့ သူ့အကြောင်းကို ရေးချင်နေခဲ့တာ ကြာ ပါပြီ……။ နိုဝင်ဘာ လဆိုတာ က သူအသီးသီးတဲ့ရာသီ..ရင့်မှည့်တဲ့အချိန် ရောက်နေတယ် ဆိုတာ ပြန်လည် စစ်ဆေးစရာ မလို ပဲ ကျွန်မ မှတ်မိနေခဲ့ပါတယ်…။
ကျွန်မ အီတလီနိုင်ငံမှ နေထိုင်ခဲ့စဉ်က နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလရောက်တိုင်း ကျွန်မတို့နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသား တွေဟာ ကျောင်းနဲ့ နီး တဲ့ Mercerata မြို့ကို နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းတိုး ဘို့သွားကြရပါတယ်..။ အဲလို သွားကြရ လေတိုင်း လမ်းတလျှောက်က အိမ်ဝိုင်းတွေထဲမှ တွေ့ နေကျဖြစ်ခဲ့လို့ပါ..။ အဲဒီရာသီတွေမှာ ဆိုရင် အပင်မှာ အရွက် တစ်ရွက်မှ မကျန်ပဲ အသီးတွေချည်း သာ ကျန်ပါတော့တယ်..။
ရွှေဝါရောင်းဝင်းပနေတဲ့အသီးတွေ ညွှတ်နေအောင်သီးနေတာ ကို မြင်ရတာ ငယ်ငယ် ကရောင်စုံချယ် ဘို့ ပေးထားတဲ့ ပန်းချီကား တစ်ချပ်လို…….မြင်ကွင်းက တိတိပပ လှ နေတော့တာ အမှန်ပါ..။ မက္ကဆီကို က ကျွန် မ သူငယ်ချင်းကတော့… ဗိုက်တာမင်နဲ့ ပရိုတင်း ကြွယ် ဝကြောင်းတဖွဖွ ပြောပြီး ဆင်းခူးဘို့ ကြိုး စားလေ့ရှိ တတ်ပါတယ်..။
မှည့်တဲ့ထိမစောင့်ပဲ ဝမ်းဗျင်းလေး ကို ခွဲစိတ်စားရတဲ့ အရသာကကို ကျွန်မပိုနှစ်သက်ပါတယ်…။ မှည့်သွား တော့လည်း ချိုမြိန်အေးမြတဲ့အရသာ က ဇွန်း နဲ့ ကော်စားရုံ ပါပဲ..။ အသီးမှာလည်း လွှတ်ပစ်စရာ အစေ့ မပါ တတ်သလို.. အခွံကိုလည်းစားလို့ရပါတယ်..။
။မကောင်းတာကို ဖယ်ထုတ်ပစ် မှ အတွင်း ကိုစားလို့ ကောင်းတတ်တဲ့ အသီးတွေလို မဟုတ်ဘဲ လွှင့်ပစ်ချင်စရာ ၊ ရွံမုန်းစရာ…ဘာမှ မရှိတဲ့ ကာကီသီးလေး လို လူ မျိုး ကျွန်မ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြဲရှာကြည့်တတ်ပါတယ်..။ ဒီလို သက်ရှိ အပင် မျိုး စိတ် လေးတစ်ခု ကတောင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုစေတယ်ဆိုရင် လူ ကသာ ဒီလို အလေ့အကျင့်တွေ ဖြစ်ခဲ့ရင် သူ့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာချိုမြငြိမ်းအေးမြ ရမှာ အမှန်ပါ…။
ဒီနေ့တော့ ကျွန်မ ခေတ္တ ရောက်ရှိနေတဲ့ အစ္စရေးနိုင်ငံ ရဲ့ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ Wastte Water Treatment ကိုလေ့လာဘို့ ကျွန်မတို့ တောင်ပိုင်း ကို လေ့လာရေးခရီးထွက်ရပါတယ်..။ အဝေးက နေကြည့်တော့ ဝင်းမှည့်နေတဲ့ အသီးတွေ ပြွတ်သိပ်နေတဲံ အပင် ငယ်ငယ် လေးတွေမို့ လိမ္မော်ခင်းတွေလို့ထင်နေခဲ့မိတာ…။ ကားပေါ်ကဆင်းတော့မှ ကျွန်မ ချစ်တဲ့ကာကီပင် များကို ဘွားကနဲတွေ့လိုက်ရ တော့ ကျွန်မ အလွန်ပျော်ရွှင်သွားခဲ့ရပါတယ်..။ အခင်းလိုက်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ခြံတစ်ခု ဖြစ်နေတာပါလား။
အီတလီမှာ က အလေ့ကျ ပေါက်တာလို အိမ်တွေ မှာ တစ်ပင်စ နှစ်ပင်စ တွေ့ရဘူးပါတယ်..။ ပြီးတော့ အပင်ကြီးတွေပါ..။ ဒီမှာ က သေချာ နိမ့်အောင် ကိုင်းဖြတ် ပြီး သီးအောင် ပြုစုပျိုးထောင်ထားတဲ့သဘော ပါပဲ..။ သက်တမ်းကတော့ ၇နှစ်၈နှစ်သားလောက်တွေရှိနေကြပါတယ်..။
တစ်ခါက ကာကီသီးလို လူမျိုး ကို အရင် ရှာဖွေ တယ် တိုင်းတာတယ်ရှိ ခဲ့ပေမဲ့.. အခုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကာကီပင်လို ဖြစ်အောင်လုပ်ဘို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အတွေး ကလည်းခေါင်းထဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်..။ ပျိုးထောင်မွေးမြူရင် ရနိုင်တယ် ဆိုတာ ကိုလည်း အသိ အမြင်ရှင်းလာသလို ခံစားရခဲ့ပါတယ်..။
အစ္စရေးနိုင်ငံဆိုတာက တကယ်တော့ သဲကန္တာရ ကြီးပါ..။ အဟာရဆိုတာကိုလည်း လူတွေသုံးတဲ့ ရေ ဆိုးတွေကို သန့်စင်ပြီး ပြန်အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်…။အပင်စားသုံးမဲအဟာရတွေကို မလိုအပ်တဲံ Heavy Metal တွေကို သန့်စင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ရေငွေ့ပျံပြီး လေလွင့်မှုမရှိအောင်လည်း ပိုက်လိုင်း တွေမြှုပ်ပြီး Drip Irrigation လုပ်ကြတာ အင်မတန်တော်တဲ့လူမျိုးတွေပါ..။
စိုက်ထားတဲ့မျိုးက တကယ်တော့ တရုတ်ပြည် ကတင်သွင်းလာတာပါ… ။ ဒီမှာ မူရင်းဒေသ မဟုတ်ရှာပါဘူး…။ ဒါကို ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်အောင် စိုက်ပျိုးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ ဇွဲ၊ လုံ့လ ၊ဝီရိယ ၊တီထွင်ကြံဆမှုတွေ ၊ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကို ကျွန်မ မလေးစားပဲမနေနိုင်ခဲ့ပါ..။
ရန်သူအာရပ်နိုင်ငံတွေ ဝိုင်းဝိုင်း လည်နေတဲ့ကြား မှာ ကာကွယ်ရေး ကိုလည်း သတိရှိပြီး ကိုယ် လုပ်စရာရှိတဲံအလုပ်ကို စူးစူးနစ်နစ် တစ်စိုက်မတ်မတ် ထူထောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သမိုင်းကြောင်းကလည်း အထင်ကရ ရှိခဲ့တာပါ..။
ဘဝဆိုတာ ကောင်းမွန်တဲ့ ရေခံမြေခံ အဆင်သင့် နဲ့ ကြီး ထွားရှင်သန် ရတတ်သလို.. ကန္တာရလို ဆုံးရှုံး ခြောက်ခမ်း ၊ လောင်ကျွမ်းရတဲ့ ဘဝတွေ လည်းရှိတတ်ပါတယ်..။ ကြံ့ခိုင် မြဲမြံတဲ့ လက် အစုံနဲ့ ခံနိုင်ရည် တွေ..သတ္တိတွေ ၊ခွန်အားတွေဆိုတာ လက်တွဲဖေါ်တွေဖြစ်သင့်လှပါတယ်..။ လဲကျခဲ့သော်လည်း သဲတစ်ဆုပ် ကိုင်ပြီး ပြန်လည် ထမြောက်နိုင်ဘို့ သာအရေး ကြီး ပါတယ်..။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အချိန်တုံးက နာမည်ကြီးထင်ရှား ခွန်အားတွေပေးခဲ့ဘူးတဲ့ Winston Churchill ရဲ့ Famous Speech ..ကို ကျွန်မ ပြန်လည်ရွတ်ဆိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
(I have nothing to offer, but tear, blood, toil and sweat . We shall never surrender)
မျက်ရည်တွေ ၊ချွေးစက်တွေ..။ နီရဲတဲ့သွေးတွေ..။ သတ္တိခွန်အားတွေ ပေးဆက်ရင်း ဝန်းကျင်လောက ကို ချိုမြိန်အေးမြ အလှအပတွေ ဝေငှ ခွင့်ရနိုင် ကောင်းမယ် လို့တော့ မျှော်လင့်မိပါတယ်..။
ကန္တာရထဲက ကာကီသီး လေးတလုံးလိုပေါ့..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 11:37 AM3မှတ်ချက်ရေးရန်
ခေါင်းစဉ်ံHebrew University of Jerusalem
သာမညဖလ အခါတော်နေ့ (သို့မဟုတ်) သံဃာ့ကျေးဇူး မမေ့ဘူး အထူးပူဇော်မယ်…
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ဆိုတာကတော့ ထူးခြားမှုတွေမျာစွာ ပြည့်စုံတဲ့ အချိန်အခါ ပါပဲ..။သာမညဖလသုတ္တန်ဒေသနာတော် (ရဟန်းပြုခြင်းအကျိုး)ကိုဟောကြားခဲ့လို့ သာမညဖလအခါတော်နေ့ လို့ သတ်မှတ်ထား ပါတယ်..။ကထိန်သင်္ကန်း ကပ်လှူပွဲ ၊ မသိုးသင်္ကန်းရက်လုပ်ပူဇော်ပွဲ၊ ပံ့သကူပစ်ပွဲ ၊ ကြာသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ၊ တန်ဆောင်တိုင်မီးထွန်းပွဲ တွေကျင်းပကြတဲ့ ထူးမြတ်တဲ့ အခါသမယဖြစ်နေပါတယ်..။ကြာသင်္ကန်း ရက်လုပ်ပွဲ၊ အသီးတစ်ထောင်၊ အပွင့်တစ်ထောင် ၊ ထမင်းအုပ်တစ်ထောင် ၊ဆီမီးတစ်ထောင် ပူဇော်တဲ့ ထောင်ပြည့်ပွဲတော်လှေကားပွဲတော် (ခေါ်) ရှင်မာလဲပွဲတော် ဆိုတာလည်း ကျင်းပကြပါတယ် လို့ကြားဘူးမှတ်ဘူးခဲ့ပါတယ်..။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေစဉ်ကတော့ အဲဒီနေ့ ဆို ဆီမီးများစွာ အလှဆင်လိုိ့ရေကန်ထဲ မျှောစေတဲ့ Loi Krathong လွိုင်ကထုန် ပွဲတော် ကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ညဥ့်နက်သည်ထိ ဆင်နွှဲခဲ့ဘူးတာ အမှတ်ရနေခဲ့ပါတယ်..။
အခုတော့ ထူးကဲသောညကာလကို တစ်ဦးတည်း ကျော်ဖြတ်လွန်မြောက်ရမှာဖြစ်တာမို့ ပူဇော် ဆဲ ပဋ္ဌာနပါဠိကို ပဲဆက်လက်ရွတ်ဆိုပူဇော်ဘို့ဆုံးဖြတ်ရင်း တစ်ခါက ကျွန်မရေးသားဘူးတဲ့ ပိုစ့်လေးကို ပြန်လည် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေရှင့်..။
လောက၌ အမြတ်ဆုံး ရတနာ သုံးပါးရှိတဲ့အထဲမှာ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် အချိန်အခါ ကာလ သမယဟာ သံဃာ ရတနာရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ပူဇော် ကြတဲ့ အချိန်အခါ ဖြစ်နေပါတယ်နော်။ အဲလို အချိန်မျိုးမှာ မေမေဟာ ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ တရား ရိပ်သာမှာ တရားအားထုတ်ဘို့ ရောက်ရှိလို့ နေခဲ့တဲ့ အတွက် ထူးကဲတဲ့ ကံတရားကို ကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ကလည်း ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရဲ့ ကျေးဇူးကို တုန့်ဆပ် ပူဇော် လိုတဲ့အတွက် မိုးကုတ် မြို့ မင်္ဂလာ တိုက်ဟောင်းမှာ တရားပြသ နေရာမှ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့် မတိုင်ခင် နှစ်ရက် အလိုမှာ ပြန်လည် ကြွ ရောက်ခဲ့ပါပြီ။
တရားစခန်းသိမ်းပွဲ အဖြစ် ဆရာတော် ဘုရားကြီးက မိုးကုတ်မြို့မှ ဝါရင့် မိုးကုတ်ယောဂီများကို ဟောကြားတဲ့ တရားကို မေမေတို့ကို ပြန်လည် ဟောကြားပေးတာနာယူရတော့ မေမေ့မှာ အလွန် ဝမ်းမြောက်ပီတိ ဖြစ်ရပါသေးတယ်။ မေမေတို့ ယောဂီ သီလရှင် များ အားလုံး ပူဇော်ကန်တော့ခွင့် ရရှိခဲ့ တာကတော့မေမေ့ ဘဝမှာ ထူးကဲတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုပါပဲလေ။ မေမေ့ဘဝထဲမှ ကျေးဇူးရှိ ခဲ့ဘူးသော သံဃာ ရတနာ များအားလုံး ကို ပူဇော် ဦးခိုက်တဲ့ အနေနဲ့ သည်စာစုကို ရေးဖြစ်ပါတော့တယ် ကလေးတို့ရေ..။
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ကို သာမည ဖလ အခါတော်နေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်တာ ကတော့မေမေ အရင် က မပြောပြ ဘူးသေး ပါဘူး။
ဂေါတမ ဘုရားရှင်လက်ထက်တော် အခါက တန်ဆောင်မုန်း လပြည့် ညမှာ အဇာ တသတ် မင်းသား မူးမတ် ပေါင်းစုံလင်စွာဖြင့် ညီလာခံသဘင်ဆင်ယင်ကျင်းပနေပါတယ်။ ဆီးနှင်းမြူတိမ် သူရိန်မီးခိုး ညစ်မျိုး ငါးဝကင်း စင်ပပြီး ကြည်နူးသာယာ ဘွယ်ကောင်းတဲ့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ညရဲ့ အလှအပကို ကြည့်ပြီး အဇာတသတ် မင်းသားက
လို့ စကားငါးခွန်းနဲ့ ချီးမွမ်းတော် မူပါသတဲ့။ အဇာတသတ်မင်းတရားဟာ အဖေကို သတ်မိတဲ့အကုသိုလ်ကံ ကြောင့် အလွန် ကြည်နူးသာယာ ဖွယ်ကောင်းတဲ့ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညရဲ့ အလှအပကို မခံစားနိုင်ပဲ အိပ်စက် မရအောင် ဖြစ်နေပါတယ်။
အဲဒီ ဝေဒနာပျောက်ကင်းအောင် မည်သည့်ဆေး နှင့်မှ ကုစား မရဖြစ်နေခဲ့တာ အမတ်တွေအကြံ ပေးတဲ့အတိုင်း တိတ္ထိ ဆရာကြီး ၆ ယောက် တို့ ထံ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဇာတသတ် ဘုရင်က သူသိလိုတဲ့ သာမညဖလ (ရဟန်း ပြုခြင်း အကျိုး ) ကိုမေးတဲ့ အခါ မှာ ကျေနပ်လောက်တဲ့အဖြေကို မရတဲ့အတွက် ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။
သမားတော်ကြီး ဇီဝက ကျေးဇူးကြောင့် ဘုရားရှင်ကို ဖူးတွေ့ မေးမြန်းသိရှိပြီးမှ အိပ်စက်လို့ ရသွားပါတော့တယ်။
အဇာတသတ်မင်းတရား ဘုရားရှင်ကို အဖူးအမျှော်သွားရောက်တဲ့အချိန်ဟာ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ညချမ်း ချိန်ခါ ကလေးပေါ့။ အဲဒီ အချိန်မှာ မြတ်စွာဘုရားဟာ ရာဇဂြိုလ် မြို့အနီး သမားတော် ကြီး ဆရာ ဇီဝက လှူ ဒါန်း ထားတဲ့ သရက် ဥယျာဉ် မှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ သရက်ဥယျာဉ် ထဲမှာပဲ ဘုရားရှင်ဟာ အဇာတသတ်မင်းကို သာမညဖလ သုတ္တန် ဒေသနာတော်ကို ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
အလွန် သာယာလှပတဲ့ တောတောင်ရိပ်နဲ့ လပြည့်ညမှာ ဟောကြားတဲ့ တရားတော်ဟာ နောင်တ တစ်ဖန် ပူပန်မှုတွေနဲ့ ဆူပွက်လောင်မြိုက်တဲ့ နှလုံးသားကို အေးချမ်းသာယာမှုကို ဆောင်ကျဉ်း ပေးနိုင်ခဲ့တာပေါ့လေ..။
အဲဒီ သာမညဖလသုတ္တန်ဟာ ဒီဃ နိကာယ်၊ သီလက္ခန္ဓ ဝဂ္ဂ ပါဠိတော်မှာ ပါရှိပါတယ်။ ရဟန်းသံဃာတော်တွေ အတွက် ကြေးမုံမှန်တစ်ချပ် သဖွယ်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ကျင့်သီလ ရှိတယ် မရှိဘူးဆိုတာကို ဤသုတ္တန် ဖြင့်ထင်ဟပ်စေနိုင်ပါတယ်။
ရဟန်းပြုခြင်း အကျိုးတွေကို ဟောကြားတဲ့ နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ကို သံဃာ တော်များနေ့လို့ ခေါ်ဆိုခဲ့တာ ကိုလည်းမှတ်သားထားလိုက်ပါ အုံးနော်။
****မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်သည် မိုက်၍ တွေဝေ၍ မလိမ္မာ၍ အပြစ်သည် တပည့်တော်ကို လွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါပြီ။ တရားစောင့်သော တရားသဖြင့် မင်းပြုသော ခမည်းတော်ကို မင်းစည်းစိမ် ( အာဏာ) ဟူသော အကြောင်းကြောင့် တပည့်တော် သတ်မိခဲ့ပါ၏။ ထို တပည့်တော် ၏ အပြစ်ကို နောင် အခါစောင့်စည်းခြင်းငှာ အပြစ်ဟု မြတ်စွာဘုရား ကလက်ခံတော် မူပါဘုရား။**** လို့ ဘုရားရှင်ထံပါး မှာ လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။
မင်းကြီး အကြင်သူသည် အပြစ်ကို အပြစ်ဟု အကြောင်းအားလျော်စွာ ကုစား၏။ နောင်အခါ စောင့်စည်း၏။ ထိုသူ၏ ကုစားစောင့်စားခြင်းသည် အရိယာ၏ ဝိနည်း အဆုံး အမ၌ ကြီးပွားခြင်း ပင်တည်းဟု ပြန်လည် မိန့်တော်မူ ပြီးစိတ်သက်သာရာရ စေခဲ့ပါတယ်။
အဇာတသတ်မင်း တရား ဘုရားရှင်ကို အဖူးအမျှော် သွားရောက်တဲ့အချိန်ဟာ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ညချမ်းချိန်ခါ ကလေးပေါ။ နန်းတော်က ဘုရား ကျောင်းဆောင်ကို သွားတဲ့အခါ နန်းမြို့တော် အရှေ့ဘက် တံခါးကထွက် ရလို့ အရှေ့ဘက်ရှိတောင်ရိပ်နဲ့ သစ်ပင် အရိပ်များလူသွားလမ်းပေါ် ကျရောက်နေလို့ မှောင်မဲ နေတာပေါ့လေ..။ ဒါကြောင့် လိုက်ပါသူတွေအားလုံးဟာမီးရှူး မီးတိုင်တွေ အလင်းရောင်တွေ ထွန်းညှိပြီး သွားရောက်ခဲ့တာက အစပြုလို့ တန်ဆောင်တိုင် မီးထွန်းပွဲတော်ဟာ ဘုရားရှင်ကို ပူဇော်ပွဲအလေ့အထ စတင် ဖြစ်တည်ခဲ့ရပါတယ်။
ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့တဲ့ သာမညဖလ သုတ္တန်ကို နာကြားခဲ့လိုက်တဲ့ အဇာတသတ်မင်းတရား အဘို့ တရားအဆုံးမှာ သောတာပန် တည်နိုင်တာပေါ့။ သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ကံက မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ် ဉာဏ် ကို တားမြစ်ထားခဲ့တာပေါ့လေ..။ ဒါကို သင်္ခန်းစာယူရပါလိမ့်မယ်။ သည် ဘဝမှာ မဂ်ဉာဏ် မရနိုင်တာကို သိပေမဲ့ အားတော့ မလျှော့ပါဘူး။ ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရားကို ကြည်ညိုပြီးသာသနာကို ကြိုးစား စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။
၅။ နောင် အနာဂတ်ကာလမှာ ဝိဇိတာဝီ အမည် ဖြင့် ပစ္စေက ဗုဒ္ဓါ ဖြစ်ပြီး ကျွတ်တမ်းဝင် ရပါလိမ့်မည်။
ကလေးတို့လည်း အဇာတသတ်မင်းသားကို နမူနာ ယူပြီး သံသရာမှာ ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်သင့်တဲ့ ဆရာမှားခဲ့ လို့ရခဲ့တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ အပေါ် သင်္ခန်းစာယူ နိုင်ကြပါစေ။ မေမေတို့ ကို သံသရာ့ချောက်ထဲမကျအောင် လမ်းကြောင်း မှန်ကိုသွန်သင် ဆုံးမသင်ကြားပြသပေးတဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင် သံဃာတော် အပေါင်းကို သာမညဖလ အခါတော်နေ့မှာ ရိုသေလေးမြတ်စွာ ရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်နော်။
(မာဂဓီ-သာစည်ရဲ့ ရာသီပွဲတော် နေ့များစာအုပ်ကို ဖတ်ရှု ကိုးကားရေးသား ပါတယ်။ မာဂဓီ-သာစည် အရှင်မြတ်နှင့်အတူ ကျေးဇူးတော်ရှင် သံဃာတော် အပေါင်းကို ပူဇော် ဦးခိုက်၊ကန်တော့လိုက်ပါတယ်။)
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 10:47 PM 1 မှတ်ချက်ရေးရန်
စိမ်းလန်းသော ကန္တာရ သို့ မေတ္တာရေစင်
Israel နိုင်ငံTel Aviv မြို့, Hebrew University, Rehovot campus ကိုကျွန်မ ရောက်ရှိ ခဲ့ တဲ့အချိန်မှာ တော့ နိုဝင်ဘာလ၊ ၁၄ရက်ရဲ့ သန်းကောင်ယံ ရောက်လုနီးခဲ့ပါပြီ..။
ဒီနိုင်ငံနဲဒီလူမျိုး ဆိုတာ ကထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ ရာဇဝင်တွေ များစွာရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းကျွန်မ အတွက် တော့ ကျေးဇူးတရားရှိသူတွေလို အမြဲ နှလုံးသွင်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉နှစ် အချိန်က အစ္စရေးလူမျိုးဆရာ နှစ်ဦး ရဲ့ သင်တန်းတခု ကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဘဝလမ်းကြောင်း တစ်ဆစ်ချိုး စေခဲ့တာဟာ အမှတ်တရဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်..။
ဘဝသံသရာမှာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ သေခဲ့ပေါင်းများခဲ့တော့ အသစ် အသစ် သော နေရာဆိုတာမရှိပါတဲ့။ တစ်နောက်မှာ သုည အလုံးပေါင်း ၁၄၀ ဆိုသောပမာဏ သည် အသင်္ချေယျဆိုတဲ့ ဂဏန်းတစ်ခု… ထိုထိုသော အသင်္ချေယျပေါင်းသည်လည်း အနန္တ .. အနန္တ ဆိုသည် မှာ လည်း ကမ္ဘာတွေဆိုတော့…..။
မမြှုပ် နှံဘူးသော သချိုင်္င်း မြေဆိုသည် မရှိ…။
မတော်စပ်ခဲ့ဘူးသောမိဘ မရှိ… နေရာဟောင်း တွေ..လူဟောင်းတွေ ချည်းပဲရယ်လို့ တွေးမိလေတော့ .. စိတ်အရှိန်အဟုန်သည် တည်ညိမ် ညံ့သက် သွားခဲ့ ပါတယ်…။
ဆန်းသစ်မက်မောဘွယ် အာရုံတွေတွေ့လို့ ပေါ်လွင်တက်ကြွ နေသေးတယ် ဆိုရင် တရားတိုးကျင့် ပါအုံး၊ သံဝေဂဉာဏ် တိုးပါအုံး လို့ ပြောနေတာနဲ့ တူတူပဲဆိုတဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ အဆုံးအမ က စိတ်အစဉ် ကို ဝင်ရောက်လာ ခဲ့ပါတယ်..။ အိုနာသေနဲ့ အဆုံး သတ်ခဲ့ရတဲ့ ဘဝများစွာ တွေ ထဲက တစ်ခု ၊ နေခဲ့ ဘူးတဲ့ နေရာ တစ်ခု ဖြစ်နေမှာ ပဲရယ်လို့သာ နေထိုင်ခွင့်ရတုံး မှာ၊ အတူနေရတုံးအခိုက်အတန့်လေး မှာ မေတ္တာပို့သခွင့်ရတယ် လို့ သဘောပိုက်ထားမိပါတယ်…။
အသားအရောင် ၊ အတွေးအခေါ်၊ အနေအထိုင် ဘယ်လို ကွဲကွဲ လူသားဆိုတာတွေ ကတော့ အတူတူ ပါပဲ။ ငါ့နိုင်ငံငါ့လူမျိုးမှဆိုတာက ကျဉ်းမြောင်းတဲ့…မာနပါတဲ့ ၊ ဘယ်နေရာနေနေ မိခင်မျက်လုံး နဲကြည့်တတ်ပါစေ လို့ ဆရာတော် ဘုရား ဆုံးမ ထားတာမို့ အရာရာ ဟာ အေးချမ်းပေါ့ပါးကြည်လင် လှပါတယ်..။
ကျွန်မ နဲ့ အတူနေရတဲ့သူတွေကတော့ ဂျော်ဂျီယာ မှ တစ်ဦး ကင်ညာမှ ဆရာ မတစ်ဦး တို့ နဲ့ အတူ နေရပါတယ် ။အိပ်ခန်းကတော့သီးသန့်ဆီပါ။ ထမင်းစားခန်းသာ အတူ သုံးရတာပါ..။ ဒီနေ့ကတော့ ကင်ညာက အဂ္ဂနက်စ်က နေမကောင်းဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာလို အထက်လှန်အောက်လျှော ဖြစ်တာပါ..။
အဖရိကလူမျိုးတွေ က သွားမှုလာမှု နည်းနည်းလေးကြမ်းတမ်းပါတယ် ၊ ဝုန်းကနဲတံခါးဖွင့်တာ ၊ လမ်း လျှောက်ကြမ်းတာ၊ စကားကျယ်ကျယ် ပြောတတ်တာ ကို နားလည်သည်းခံ ပေးထားရပါတယ်..။ သူတို့ အုပ်စုလိုက် သတင်းလာမေး ကြ တာကို စိတ်ရှည် ၊လက်ရှည် တံခါး ထဖွင့်နေရတာမို့….ပြုတ်ပြုတ်ကျတဲ့ မိခင်မျက်လုံး ခဏခဏ ပြန်ကောက် တပ်ရပါတယ်..။
အစ္စရေးဆရာဝန် ရောက်လာခဲ့တော့ ကျွန်မကို ဟီးဘရူးဘာသာ တတ်လားလို့မေးပါတယ်..။ မတတ် ဘူးဆိုလေတော့ သူက ဖုန်းလေးဖွင့်ပြီး ဘာသာပြန်တယောက်ကို ခေါ်ပါတယ်..။ ဖုန်းထဲက ဘာသာပြန်က ကျွန်မကို ဘာလုပ်ရမယ် ဆိုတာ ညွှန်ကြားပါတယ်..။သူက ဆေးတစ်လုံး ထိုး ပြီး သည်းလာရင် ဆေးရုံ တင်ဘို့ ညွှန်ကြား ပြီး ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်.။ဆေးတော့ပေး မသွားခဲ့ပါဘူး ရေပဲသောက်ဘို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်..။ ကျွန်မလည်း ဆရာဝန် ပြောတဲ့အတိုင်း လူနာ ကိုပြောပြပြီး အိပ်ရာ ဝင်ခဲ့ပါတယ်..။
မနက် ၃နာရီ ခွဲလောက်မှာ ကျွန်မ အိပ်ရာကနိုးတော့ အဂ္ဂနက်စ်က ဒယီးဒယိုင် နဲ့ အ ခန်းထဲက ထွက်လာ ပါတယ်..။ မသက်သာကြောင်း နဲ့ ဒီဆေး သောက်ရင် ရမလား ဆိုပြီး ဆေး ကဒ်ကလေး တစ်ခုလာပေးပါတယ်…။ ကျွန်မက ဖုန်းဆက်ပေးရမလားမေးပါတယ်။ သူကတော့တော်တော်လေး ဖျော့တော့နေတာ သတိထားမိပါတယ်..။
ကျွန်မ က ကလေး နှစ်ယောက်အမေ ဖြစ်ခဲ့လေတော့ အဲလို ဖြစ်ရင် ဓာတ်ဆားရည် များများ တိုက်ရမယ် ဆိုတာ ခန့်မှန်း မိပါတယ်။ လူမျိုးခြား ဆိုတော့ ရမ်းလည်းအကြံမပေး ရဲလို့ ညက ဝင်မပါခဲ့တာပါ..။အခုတော့ ဝင်ပါရတော့မယ် ဆိုတာ သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။ အဆောင်တစ်ခုလုံးက အိပ်မောကျနေတော့တာကိုး..။
သူ့ကို အရင်မေးရပါတယ်..။ ငါ့တိုင်းပြည် မှာ ငါ့ကလေးတွေကို လုပ်ပေးသလို လုပ်ပေးရင် နင်သဘောတူလားဆိုတော့ တူပါတယ် တဲ့..။ အားကိုးရာမဲ့နေတဲ့ သူ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီး ကျွန်မမှာ တကယ့် မိခင်နေရာကိုကော စိတ်ဝိဥာဉ် ပါ ပူးဝင်လိုက်မိပါတယ်..။
ရေနွေးအိုးကို တည် ထားပြီး သူ့ ဝမ်း ဗိုက်ကို ပါလာတဲ့ ပရုပ်ဆီနဲ့ သာသာလေးပွတ်သပ်နှိပ်နယ်ပေး လိုက်ပါတယ်..။ ရေနွေးအိုး ဆူလေတော့ ဖန်ခွက် လေး ခွက်တန်းစီပြီး ထည့်ရပါတယ်..။ Tea Bag တစ်ခုကို ခဏတာစီထည့် စိမ်ပြီး ထုတ်ထားလိုက်ပါတယ် သကြား တစ်ဇွန်းစီရယ်ဆားနည်းနည်းရယ် ထည့် ပြီး အအေးခံထား လိုက်ပါတယ်..။ လက်ဆေးရင်း မေတ္တာသုတ်တော် နဲ့ ပရိတ်တော်များ ရွတ်ဆိုပူဇော် ပေးနေလိုက်ပါတယ်..။
ပထမ တစ်ခွက် တိုက်ပြီးချိန်မှာတော့ အားရှိလာကြောင်းပြောပြပါတယ် ..။ ကျွန်မလည်းအားတက်လာပြီး သူ့ကိုမှောက်ခိုင်း ပြီး ကျောရော ခါးတွေပါ အသာအယာ နှိပ်နယ်ပေးလိုက်ပါတယ်…။သူမဟာ တစ်ညလုံး အိမ်သာထသွားလိုက် အန်လိုက် လုပ်နေခဲ့ရတာ ညောင်းညာတောင့်တင်းနေမှာ အမှန်ပါ..။ ငယ်ငယ် ကလေနာ ဖြစ်လို့ ကျွန်မကို တစ်ည လုံး မအိပ်စေပဲအဲလိုနှိပ်မှ အိပ်ပျော်တတ်တဲ့ သား ကိုအုတ် ကကျွန်မကို သင်ပေးခဲ့တဲ့ နည်းတွေပါပဲ..။
ကျွန်မက Breathing In , Breathing Out အာနာပါန ရှုမှတ်နည်းကို ပါသင်ပေးလိုက် တာအဂ္ဂနက်စ်ဟာ ညိမ်ကျသွားပါတော့တယ် ။နောက်ထပ် ဓာတ်ဆား ၂ဖန်ခွက်ဆက်တိုက် ထ သောက်ပြီး ချိန်မှာ သူမရဲ့ မျက်လုံးလေးဟာ ကြည်လင်လာပါတယ်..။
ကျွန်မ က ဘာမှ မတွေး ဘို့ ကြွက်သားလျှော့ထားဘို့ပြောရင်း အိပ်စေလိုက်ပါတယ်..။မနက် ၇နာရီ့ခွဲ ချိန်မှာ အာဖရိကံ ပရိသတ်ဟာ ထုံးစံအတိုင်း ဝုန်းဒိုင်း ဝုန်းဒိုင်း တက်ကြွစွာ ချီတက်လာကြပါတယ်..။ ကျွန်မ ကလူနာကို အိပ်စေချင်သေးလို့ တားပေမဲ့ တားမရပါဘူး..။
ကျွန်မတို့ သင်တန်းမှာ တစ်ဝက်လောက်ဟာ အာဖရိက တိုက်ကဖြစ်ပါတယ်..။ နည်းနည်း ရဲတင်းတဲ့ သူတို့မျက်လုံးလေး တွေ ညံ့သက်စွာ နဲ့ အဂ္ဂနက်စ် ရဲ့ အခန်း ကပြန်ထွက်လာကြ တာမို့ ကျွန်မ အားလုံးကို သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်..။ ကျွန်မရဲ့ တစ် မနက်တာ သူနာပြု စုမှုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပါ..။
အဂ္ဂနက်စ် ဟာလူကောင်းပကတိ ပမာ အတန်းတက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်..။ အတန်းကတော့ Food Microbiology Lab ထဲမှာ ဖြစ်ပြီး၊ Lab ထဲ မှာတော့ မြန်မာဆေး တွေစွမ်း တယ် Virus Infection ကိုတောင်နိုင်သတဲ့ ဆိုတာ ကို အာဖရိကံများ ပြောနေသံများကြားရပါတော့တယ်..။
အော်……. ပညာရှင်တို့ရေ… Osmosis Simple Concept မှာ မိခင်တယောက် ရဲ့ မေတ္တာ ပေါင်းစပ်ပေး ခဲ့တယ် ဆိုတာကို တော့ Power Point Presentation လုပ်စရာမလိုပဲ နားလည်စေဘို့ အားလုံးကို ကျွန်မ ပြုံး ပဲပြခဲ့ပါတော့တယ်..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 7:15 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်